MX Cirro: Laba aqoonyahan, goobo kala duwan, waxtare iyo waxmatare (Qormo) – Radio Daljir
MX Cirro: Laba aqoonyahan, goobo kala duwan, waxtare iyo waxmatare (Qormo)
Febraayo 15, 2019 5:59 g 0
Qormadaydaan gaaban waxaan ku soo qaadanayaa laba aqoonyahan oo aan si kala gooni ah ula kulmay, sheekana na dhexmartay. Mid waa haweenay Kenyan ah oo da’ 60naad, midna waa aqoonyahan Soomaali ah oo da’ 70naad jooga.
Goobtu waa dugsiga hoose dhexe ee Juja Road, waa iskuul dawladdu leedahay oo ku yaal Nairobi, boqolaal carruur ah ayaa dhigata, waxay heleen waa fursadda waxbarasho ee dawladda, waa faraxsan yihiin, waa wada ciyaarayaan, waxaase dhex taagan macalimad, magaceedu waa Julias, waxay shaqada ku timaaddaa gaari aad u qurux badan oo Ranger Rover ah oo qiimahsu yahay konton kun oo doolar, dabcan waxaad is waydiinaysaa macalin dawlad musharkeed qaataa gaari sidaan u qaali ah sidee u iibsan karaa, waana meesha anniga dareenka ah inaan la sheekaysto igu dhalisay.
Iskuulka qayb carruurtayda oo hadda dugsi sare ku jirta ayaa wax ka baratay oo inaan wax waydiiyo macalimadda iguma ahayn dhibaato, waayo waa macalimadaydii. Julias waa tuma: waa takhtarad lafaha kabta, waxayse hadda wax bartaa dugsi hoose dhexe, waxay iiga sheekaysay siday arrintaani ku dhacday.
Waxay ku bilowday, iskuulkaan aan hadda joogo waa goobtaan waxbarashada dugsiga hoose ka dhameeyey 47 sano ka hor, markaan waxbarashada dugsiga sare dhameeyey waxaan helay fursad waxbarasho oo dawladdaydu i siisay, waxaanan bartay aqoonta sahay gaarsiinta (logistic) jaamacadda Nairobi, markaan ka soo qalin jebiyey waxaan helay shaqo, waxaan la soo shaqeeyey hawl galkii Soomaaliya ee nabad ilaalinta ee UNISOM ee 1990maadkii bilowgiisii, kadib waxay aaday Maraykanka oo ay ka soo diyaarisay takhtarnimo, siiba qaliinka lafaha, wadankeedii Kenya ayey ku soo noqotay, 20 sano ayey ka ahayd takhtarad lafaha jaba kabta.
“Mohamed, anniga laba carruur ah ayaan dhalay, labadiina waxbay barteen oo waa shaqaystaan, anniga dhaqaale waan sameeyey, hadda takhtarnimadii waan iska daayey, waxaan go’aansaday inaan shanta sano ee soo socota ee xoog igu haray aan wax ka dhigo dugsigii hoose dhexe aan aan wax ku bartay, tiirkana u ahaa noloshayda” ayey tiri Julias.
Iyadoo isku kalsoon oo ku faraxsan shaqaday hayso ayaa waxaa i qaaday dareen aad u xanuun badan oo ah tolow anniga dugsigii hoose ee aan wax ku bartay xaggee ahaa, ma u malaynayo in meeshii uu ka dhisnaa cidi degan tahay oo waa horaaba lagu kala qaxay, dhisme ahaanna maba u jiro, waa inta niyadayda ku soo dhacday!.
Julias subaxii lixda aroornimo ayey timaadda iskuulka iyadoo ka soo kalahda xaafadaha dadka ladan degan yihiin ee Nairobi, waxay dhigtaa maadada sayniska.
“Mushaharka macalinimada aan ku qaato waxaan ku ridaa sanduuqa tabaruca ee carruurta aan waalidka lahayn lagu gargaaro, waayo dhaqaale uma baahni, inaan aqoontayda carruurta wadankayga ku celiya ayaa ii ah sharaf” ayey tiri.
Akhriste bal bar bar dhig sheekadaan.
Qofka kale ee aan la kulmay waa aqoon yahan Soomaali ah, goobtaan kula kulmay waa Jabuuti, wuxuu ku sugan yahay guri yar oo jiingad ah, xilli aad u kulul ayey ahayd, ma doonayo inaan magacaabo aqoon yahankaas, wuxuu ka mid ahaa ardaydii ka baxday Lafoole, macallinna wuu ka noqday isla jamacadaas, kadibna dawladdii ayaa 1980 waxay u dirtay kooras heerka labaad ee jaamacadda ah oo uu afar sano ku maqnaa magaalada London ee cariga Ingiriiska, 1984 markii uu dhamaystay wuxuu iska xaadiriyey Adis Ababa oo ah caasimadda Itoobiya oo markaas fariisin u ahayd ururo mucaraad ku ahaa dawladdii waagaas jirtay, si uu ugu biiro ururadaas.
Waxaanse waydiiyey inuu war ka hayey markuu waxbarashada dhameeyo ee uu Muqdisho ku noqdo waxa dawladdu u qorshaysay?
“Maxamedow, dawladdii waxay ii qorshaysay inaan qaybta manaahijta ee waxbarashada ka hawl galo oo horumarin ku sameeyo” ayuu yiri.
Aqoonyahankaani wuu ku faraxsanaa go’aankaas oo taliskii markaas jiray ayuu aad ugu caraysnaa,.
Dawladdii dhacday, hadda wuxuu hawl gab ku yahay Jabuuti, dhaqaale iyo nolol toona kuma haysto, qol kulayl badan oo marba korantadu ka tagto ayuu ku nool yahay, anniga oo booqday kumaan dhaamin dhaqaale, waxaanse markaas ugu darraa lacag looga lahaa korantada gurigii deganyahay ku jirta oo uu waayey lacag uu isaga bixiyo, wixii lagu lahaa ayaan markaas qayb ahaan ka bixiyey, waayo marawaxadda uu kulaylka daran ee Jabuuti ka dugsanayo ayaa korantadu muhiim ugu tahay.
Labadaan aqoon yahan sheekadoodu kala qurux badan, waxaanse u bahanahay inaan ka qaadano cibro, akhriste aan ku waydiiyee intee aragtay aqoon yahan Soomaaliyeed oo weli hadal haya goobtii uu wax barashada hoose ku bartay inuu wax ka dhigo iska dhaafe inuu xitaa maalin booqday?
AHU Abwaan Abshir Bacadle ayaa gabay uu tiriyey waxaa ku jiray “Aqoonyahanka lagu daalayoow daynta soo celiya” erey gun dheer weeye, qofkastoo Soomaaliya oo wax bartay xilligii dawladdii wuxuu ahaa mid wax ku bartay hantidii ummadda, bal ka waran hadduu dumiyey dalkii waxbaray, musuqay oo wixii loo dhiibo uu is mariyo ama hagardaamo inaan waxba u hagaagin uu la daba joogo, ma aqaan habaar kaas ka weyn oo qof ku dhaci kara?.
Gunaanadkayga qoraalka waxaan kula hadlayaa dhalinyarada hadda fursadda qaaliga haysata inay ka fekeraan sidii ay uga shaqayn laaheeyn goobtay ku noqon lahaayeen hawl gab oo ah wadanka hooyo, haddii kale sida aqoon yahanada hadda da’da gaaray ayey dibadaha ku dac daroobi doonaan.
“Dalkaaga haddaadan wax ku kordhinayn, dhib ha u geysan”
FG: Fadlan nala qaybso qormadaada waxtar iyo xiisaba u leh bulshada Soomaaliyeed, oo ku soo hagaaji cinwaanada kala ah: [email protected] | [email protected]
Siyaasadda & Dhaqaalaha 422 Wararka 14346